MR MRT: အဆင်ပြေပါတယ် တဲ့
“ဒီဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ . . . အဆင်ပြေပါတယ်။ မှန်ပါ ဘုရား . . . ။ တပည့်တော် . . . နေ့တွက်ရတာပေါ့။ တစ်နေ့ ငါးထောင်ပါ . . .။ ဘုန်းကြီးနောက် မလိုက်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့ ငါးထောင်တော့ . . . ကိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကယ်ရီဆွဲရင် တစ်သောင်းနှစ်သောင်း ရတဲ့နေ့တွေတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ခုဟာကတော့ ကုသိုလ်လည်းရ ၀မ်းလည်းဝလို့ အောက်မေ့ရတာပေါ့။ ဘ၀မှာ . . . ငွေတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ . . . ရတဲ့ဘ၀ ကျေနပ်ပြီး ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ လုပ်ပေးရတာပေါ့ ဘုရား . . .။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကို ပို့ရတယ်ဆိုရင် . . . တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် . . . ရွာဆက်နီးရင် နီးသလို သုံးလေးရွာ၊ လေးငါးရွာ ပို့ပေးရတာပေါ့။ မှန်ပါ . . . .။ ဘုန်းကြီးအတွက် ဘယ်လောက်ရရ တပည့်တော်အတွက်ကတော့ ငါးထောင်ပါပဲ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကတော့ လူတွေက ဘုန်းကြီးကို လှူလိုက်ကြတာပဲလေ။ တပည့်တော်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အလှူငွေ ရတာရှိသလို ဆွမ်းဆန်လည်း ရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အလှူခံထွက်ရင် မြို့နယ် သံဃာ့နာယက အဖွဲ့ဆီက ခွင့်ပြုချက် ယူရသေးတယ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ်။ တပည့်တော် ပို့ပေးရတဲ့ ဘုန်းကြီးဆီမှာတော့ အလှူခံဖို့ ခွင့်ပြုချက် စာရွက်စာတမ်းတွေ ဘာတွေ မတွေ့မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မတားမြစ်ပါဘူး။ ကုသိုလ်ရေးပဲ ဘုရား . . .။ အဆင်ပြေပါတယ်။ လူတွေကလည်း လှူကြပါတယ်။ သာဓုခေါ်ရတာပေါ့။ အလှူခံဖို့ ခွင့်ပြုချက် ယူရသလို ကျောင်းဆောက်တယ်၊ ကျောင်းထိုင်တယ် ဆိုရင်လည်း သံဃာ့နာယက ခွင့်ပြုချက် ယူရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အခု ဘုန်းကြီးကတော့ သူ့ဟာသူ . . . သူ့ကျောင်းနဲ့သူ သီတင်းသုံး နေတာပဲ။ ခွင့်ပြုတာတွေ၊ တားမြစ်တာတွေ မရှိပါဘူး။ ဘုရားသားတော်တွေပဲ ဘုရား . . .။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ခွင့်ပြုတာတွေ တားမြစ်တာတွေ . . . အဲ့ဒါတွေကတော့ . . . ဆရာတော်ကြီးတွေက လိုအပ်လို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပေါ့ . . .။ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေနဲ့ ဆိုင်တာဆိုတော့ တပည့်တော် သိပ်ပြီး နားမလည်ပါ ဘုရား . . .။ တပည့်တော် အနေနဲ့ကတော့ . . . ကိုယ်ကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ သာသနာပြုတယ်လို့ အောက်မေ့ရတာပေါ့။ အဆင်ပြေပါတယ် ဘုရား . . .။”
Posted by Ashin Acara. at 2:10 AM
Labels: 01C. Articles - ဆောင်းပါးများ, 04. Reader - ဖတ်စာ, 08. News Words - သတင်းစကား